Nahoana ianao no mila mamorona rindran-damina avo lenta amin'ny tranokalanao?
Ny singa manan-danja indrindra amin'ny fanatsarana ny môtera dia tsy isalasalana fa mampifandray ny fanorenana. Ny fitaovam-pikarohana dia mampiasa rindranasa ho toy ny famaritana ny tranonkala. Ny rindran-damina avo lenta kokoa dia manondro ny toerana misy anao, ny safidy kokoa ny mamaritra ambony kokoa amin'ny SERP azonao. Ny rakitra Dofollow dia manamaivana kokoa an'i Google mba hamaritra ny fahefan'ny pejy Internet sy ny laharana. Izany no antony hanatsarana ny toerana misy ny tranokalanao amin'ny pejy valin'ny fikarohana ary hahasarika ny fifamoivoizana misimisy kokoa; Tokony hanantitrantitra ny tranokala avoakan'ny tranonkalan'ny PR ianao.
Ity lahatsoratra fohy ity dia natao hanehoana anao ny fomba ahafahana miverin-drakitra avo lenta amin'ny tranonkala. Fa aloha, avelao aho hanazava aminao ny dofollow backlinks.
Backlinks Dofollow sy ny anjara andraikitry ny orinasan'ny fitaterana
Backlinks Dofollow dia rohy ivelany avy amin'ny tranokala hafa manondro ny loharano web. Ireo rohy ireo dia fantatra koa ho rohy ivelany na ivelany. Ireo rohy ireo dia mamela ny sira fifandraisana amin'ny loharano iray mankany amin'ny iray hafa. Raha mikarokaroka ny tranonkalanao Google ny bots tao Google, dia tsy miankina amin'ny fampahalalam-baovao fotsiny ihany izy ireo, fa koa amin'ny famantarana an-jatony tahaka ny rohy ivelany. Raha dofollow ireo rohy ireo, dia hiantso jiro mampifandray avy amin'izy ireo ny fikarohana bots. Ny lahatsoratry ny lam-peo avo lenta dia hanana fiantraikany manan-danja eo amin'ny fomba fijerin'ny mpamorona ny tranokalanao.
Izany no antony mahatonga anao te hamorona rohy misy anao, mahasorena ny mifantoka amin'ny ezaka fananganana rohy amin'ny loharano izay mamela anao hanangana rohy manaraka. Vokatr'izany, ireo rohy avo lenta ireo dia manatsara ny laharan'ny pejy ary manangana ny marika famantarana anao.
Inona ireo fomba ahafahana miverin-dalana avo lenta?
Misy fomba maro samihafa amin'ny fomba ahafahanao mahazo rohy dofollow amin'ny blôginao. Na izany aza, mila mifantoka amin'ny adiresy avo lenta PR isika. Ny fahazoana azy ireo dia tsy mora kokoa noho ny eritreritrao. Andeha hojerentsika amin'ny antsipiriany ny fomba sy ny toerana ahafahana miditra dofollow.
Mba hahazoana ny kalitaon'ny bakalorea sy ny organic, mila mandray anjara amin'ny adihevitra forum. Tokony ho mpampiasa mavitrika indrindra amin'ny sehatra nichehinao ianao ary hametraka fanehoan-kevitra mahasoa, manentana sy mahay mandanjalanja amin'ny lohahevitra ifanakalozan-kevitra vaovao. Na izany aza, aza miezaka foana ny ho voalohany amin'ny adihevitra mba tsy hisalasala amin'ny admin. Forums dia toerana lehibe hampiroboroboana ny orinasa, hamorona fifandraisana vaovao ary hampitombo ny lazanao. Amin'ny voalohany, mila mametraka lohahevitra valo ianao, fara-fahakeliny, raha tsy mampiditra ny backlinks, ary vao manomboka manangana fanangona organika. Na izany aza, dia tsy tokony hanaintaina sy tsy hentitra ianao.
Fanamarihana ny mpitoraka blaogy
Afaka mampiroborobo ny raharaham-barotra ianao amin'ny alàlan'ny fanatrehana ireo bilaogera hafa mifandraika ary mamela azy ireo hijery ny vokatrao na ny serivisinao. Noho izany, aloha indrindra, mila mahita ny blôgy tsara ianao mba hamoronana rohy mifandraika izay mitondra fifamoivoizana. Tadiavo fotsiny ny vokatra ilaina amin'ny mpamaham-bolongana. Raha tsy izany, ianao dia mety hampivelatra ny fahatsapanao ny marikao. Avy eo dia hahita fomba hifandraisana amin'ireo mpitoraka blaogy. Raha ny fitsipika, ny toerana misy ny fifandraisana ao amin'ny lohatenin'ny bilaoginy. Afaka manoratra mailaka ianao na mifandray aminy amin'ny alalan'ny LinkedIn. Raha mahazo valiny mahafa-po ianao, dia izao no fotoana hametrahana ny vokatrao. Mila mifidy ny vokatra tsara indrindra ianao mba hamoronana ny fahatsapana marina momba ny marikao Source .